IFirefox 84 iza nezithuthukisi zeWebrender zeLinux, imemori eyabiwe nokuningi | Kusuka kuLinux
Uhlobo olusha lwe IFirefox 84 ilapha futhi iza nokuthuthuka okuhlukahlukene ezinye zazo ezigxile kwiLinux, njengokuthuthukisa ukusekelwa kwe- I-Webrender yeX11 neGnomekanye nezindlela zokwabiwa kwenkumbulo okwabiwe kanye nezithuthukisi ze-Docker, phakathi kwezinye izinto.
Ngaphezu kokulungiswa nokulungiswa kwamaphutha kuFirefox 84, Ukukhubazeka okungu-31 kulungisiwe, okuyi-19 okumakwe njengokuyingozi, Ezingu-7 zazo (ezihlanganiselwe i-CVE-2020-35113 ne-CVE-2020-35114) zibangelwa izinkinga zememori, njengokugcwala kwe-buffer nokufinyelela ezindaweni zememori esezikhululiwe. Lezi zinkinga zingaholela ekusetshenzisweni kwekhodi enonya lapho kuvulwa amakhasi akhiwe ngokukhethekile. Ukuba sengozini okubucayi kwe-CVE-2020-16042 kuyabonakala futhi, okuthi, ngokukhohlisa uhlobo lweBigInt, kuvumele ukufunda okuqukethwe kwememori engaqaliwe.
Kungaphawulwa futhi ukuthi IFirefox 84 izoba yinguqulo yokugcina ukuxhasa i-Adobe Flash plug-in, njengoba njengoba abaningi bezokwazi ukuthi i-Adobe ihlose ukuqeda ukwesekwa kweFlash ekupheleni kukaDisemba 2020.
1 Izici ezintsha eziyinhloko zeFirefox 84
2 Ungayifaka kanjani inguqulo entsha yeFirefox 84 kuLinux?
Izici ezintsha eziyinhloko zeFirefox 84
Kuzinguquko ezinkulu ezigqamile, singakuthola lokho ekusatshalalisweni kweLinux nge I-GNOME ne-X11, injini yokwakhiwa kweWebRender isetshenziswa ngokuzenzakalela, Abashayeli abaphethe i-NVIDIA bahlala kuhlu lwamabhulokhi weWebRender, kanye nabashayeli be-Intel lapho besebenzisa izinqumo zesikrini ezingama-3440 × 1440 nangaphezulu. Ukuphoqa ukufakwa mayelana: config, nika amandla isethingi "gfx.webrender.enabled" noma qala iFirefox ngesethi yokuguquguquka kwemvelo MOZ_WEBRENDER = 1.
Ngesikhathi ye-Android, injini yeWebRender inikwe amandla kumadivayisi ane-Mali-G GPUs, kanye ne-Adreno 5xx (i-Google Pixel, i-Google Pixel 2 / XL, i-Oneplus 5), i-Adreno 6xx (i-Google Pixel 3, i-Google Pixel 4, i-Oneplus 6), ne-Pixel 2 ne-Pixel 3. kanye ne-Intel GPUs yesizukulwane sesi-XNUMX, ye-macOS yenguqulo ye-Big Sur.
Olunye ushintsho olukhulu lweLinux, eNgiyakwazi lokho manje kusetshenziswa izindlela zesimanje zokwabiwa kwememori, okuholela ekusebenzeni okungcono nasekuhambisaneni okungcono ne-Docker. Lapho ubuka okuqukethwe kwemultimedia njengamavidiyo we-YouTube ivolumu ye-GNOME ne-MATE nezilawuli zokudlala manje zikhombisa isithonjana sokuqukethwe okudlala manje nezinkinobho zokulawula ukudlala.
Kusetshenziswa ingqalasizinda ye Ukucushwa kwesilawuli kude, ukulayishwa okusebenzayo kwezitifiketi eziphakathi kwe-CA kwaqaliswa, eyehlise inani lemiyalezo yamaphutha lapho ibuka amasayithi amisiwe ngokungafanele. Enguqulweni entsha, ukusekelwa kwemishini ye-CRLite nakho kufakwe kufomethi yokusebenza, evumela ukuhlela isheke lesitifiketi esisebenzayo ngokumelene nedatha egcinwe ohlelweni lomsebenzisi.
Kumphathi we-plugin, ikhono lokunikeza nokuhoxisa amalungelo angeziwe liyasetshenziswa Izinketho zokuzikhethela ezidingekayo zokwenza ukusebenza okunwetshiwe ku-plugin, okunikwa amandla ngamasethingi ahlukile. Phambilini, la malungelo anwetshiwe abecelwa ngokunamandla lapho imisebenzi enwetshiwe ivunyelwa futhi ingakhonjiswa kusixhumi esibonakalayo se-: addons.
Okunye okugqanyisiwe kule nguqulo entsha yeFirefox 84 yi ukusekelwa kwezinhlelo ze-Apple ngokususelwa ku-chip ye-ARM M1, enika amandla iMacBook Air entsha, iMac Mini, neMacBook Pro. Nokho, ezinhlelweni ezintsha, kunezinkinga zokubuka amavidiyo avela ku-Netflix, Hulu, Disney + ne-Amazon Video Prime, adinga ukufakwa kweRosetta.
Ungayifaka kanjani inguqulo entsha yeFirefox 84 kuLinux?
Ngaphezu kwalokho, sekuvuselelwe inguqulo yeFirefox LTS (ukwesekwa kwesikhathi eside) i-78.6.0 yenziwe futhi ngaphezu kokuthi igatsha elilandelayo leFirefox 85 selivele lingene esigabeni sokuhlola futhi ukwethulwa kwalo kuhlelelwe uJanuwari 26 .
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IFirefox 84 iza nezithuthukisi zeWebrender zeLinux, imemori eyabiwe nokuningi